Umzimba womuntu kusuka ekuzalweni kuya eziphambili ukuguga is a indlela kunalokho eziyinkimbinkimbi kwesikhathi ukunikeza ukwehluleka. Ukuze kwenziwe ngcono izinga lempilo nokusindisa abantu kusuka ezihlukahlukene izifo, nemvelo isegazini futhi eguquguqukayo, izidakamizwa ezisetshenziswa. Omunye lalivamile kulezi zinsuku izidakamizwa - "Cortexin". Yokusetshenziswa sinquma ukusetshenziswa kwezidakamizwa e-iziyaluyalu elandelayo zobuchopho:
- imithelela wathola ukulimala ekhanda;
- ukuvuvukala kobuchopho;
- iziyaluyalu kwegazi ebuchosheni.
Ngaphezu kwalokho, ezingane izidakamizwa "Cortexin" isichasiselo liyala ukusebenzisa ngesikhathi ekwelapheni isifo sokuwa, zezingane cerebral palsy futhi ukuqeda ukubambezeleka ekukhuleni kwengane.
Ngemva kokubhekana ukucindezeleka, ukugqugquzela ukukhiqizwa ebuchosheni Dopamine futhi serotonin, kanye ukusheshisa buyekeza izinzwa korteksin isicelo. Imiyalelo isicelo ithi ngemva kokuphela Inkambo yokwelashwa normalizes isimiso sezinzwa futhi kuthuthukisa nenkumbulo.
"Cortexin" itholakala ifomu powder elimhlophe noma aphuzi, awafaka ampoules. ukulungiselela encibilikayo ngamanzi ngoba umjovo noma novocaine. I nomuthi ingena emzimbeni by ujove esicutshini, futhi umthamo kumele ngokuqinile ukufanisa nezidingo udokotela. Ukwelashwa Kwenziwa ngokuvumelana uphethwe futhi isikhathi 5-10 izinsuku. Ngaphezu kwalokho, ukwelashwa nge "Cortexin", isicelo sakhe sesivele kwenziwe kungaba liphindwe inkambo eyodwa, uma udokotela ibona kunesidingo, ngemuva kwezinyanga 1-6.
Ngemva Inkambo yokwelashwa waphawula ukuthi iziguli encishisiwe ulaka nokucindezeleka iphele.
Izidakamizwa "Cortexin" umyalelo ku isicelo ethwala ke iqembu antidepressant, anxiolytics futhi antipsychotics, udokotela kuphela angakunika umuthi kungenjalo kungenzeka ukusabela okungahlosiwe isimiso sezinzwa. Sami umjovo Kufanele ufakwe ngokuqinile ngaphansi kweso lwezokwelapha, njengoba uhlangothi umphumela kuyinto ukusabela nomzimba.
Ngaphezu okungenhla ubuchopho uthi, izidakamizwa esebenzayo kabanzi yafuna ekwelapheni izifo ezithathelwanayo kanye inflammations zobuchopho, ezifana-meningitis.
Kukhona futhi Izimo lokwamukela "Cortexin". It is ukwazi ukuthi nge ngokwedlulele ngokuqapha izidakamizwa kumele sisetshenziswe iziguli isidumbu ozwelayo izingxenye izidakamizwa. Futhi sinqatshiwe ukuqala indlela yokwelashwa ngesikhathi sokukhulelwa futhi ngenkathi ibele, ngoba abazi ukufunda umphumela "Cortexin" embungwini futhi umntwana osanda kuzalwa.
ukusetshenziswa kanye kanye nezinye izidakamizwa isetshenziswa lesi sidakamizwa "imiyalelo Cortexin 'ukusetshenziswa is hhayi kungavunyelwe, kodwa nokuphathwa neminye imithi ngesikhathi Inkambo yokwelashwa kungcono ukuqala ngokukhuluma udokotela wakho.
Ngokuvamile, ngenxa yokuthi emva kokwelashwa ngcono izinqubo umzimba esikhaleni intercellular futhi njengoba amangqamuzana ezinzwa e ubuchopho, ningakwenqabi ukuphathwa ebekiwe. Ngoba umphumela nokuncipha umsebenzi kokuquleka, kanye nokumiswa khulula ukwakheka olukhulu ukuthi kubathinta nemiphumela amangqamuzana obuchopho. Inqubo kususwa ukulungiselela kusuka i umzimba, kanye ngesikhathi ukuncela yayo holons e nezicubu ubuchopho, akunakwenzeka ukulandelela. Eqinisweni, ngemva engena nomuthi umzimba kweso ocushiwe izinqubo umzimba.
Nakulokhu futhi kuyafaneleka ukuthi amalungiselelo efana "Cortexin" akufanele isetshenziswe ngaphandle kadokotela, ukunakekela umzimba wakho futhi musa ubuvila ukucela iseluleko.
Siphephe Kangakanani "Pantokaltsin"? Yokusetshenziswa kungaba okujabulisayo
Amalungiselelo ukuya esikhathini
Imithi Ngempumelelo 'Nimesil': indlela usebenzisa
"Smecta" kulokho kusiza? Yokusetshenziswa, ngempela
Ukwelashwa "Imudon": ukubuyekezwa, yokusetshenziswa futhi analogue
Uma amathole obukhulu. Ziyini izimbangela, ungabhekana kanjani nesimo?
"Entwasahlobo ukuqhakaza uthando" abadlali. OMFUSHANE INCAZELO serial
Umbala Burgundy - impilo kanokusho
Ibhajethi nokuphuma kwemali kanye Ifomu №4
Elena Topilskaya: Biography futhi lwezincwadi
Ukuvakashela Kazan ngo-September: Amathiphu izivakashi
Waterhouse syndrome - Friderichsen: pathogenesis, ukunakekelwa okuphuthumayo, ukwelashwa